Shirkii culimada ee xag-jirnimada iyo fahanka diinta oo laga soo saaray Fatwo ka dhan ah Shabaab – Radio Daljir
Seteembar 12, 2013 2:52 b 0
Muqdisho, September 12, 2013 – Shirweynihii looga hadlayey xag-jirnimada iyo ku talax-taga diinta Islaamka ee shalay Muqdisho ku soo dhamaaday ayaa laga soo saaray qoddobo waa weyn, kadib wakhti badan oo culimadu gorfeeyeen sida khaldan ee loo fahansiiyey diinta, dhalinta ku jirta Al-shabaab iyo bulshada qeybteed.
Shirka oo ahaa mid balaaran ayaa waxaa soo xiray Ra?isal wasaraha Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon, waxaana laga soo saaray qoddobo faah faahsan oo ay qeyb ka yihiin in meel looga soo wada jeensado dagaalka lagula jiro ururka Al-shabaab, culimada ayaa soo saaray Fatwo ka kooban 7 qodob oo baaq loogu jeediyey Soomaalida.
1. Kooxda Al-shabaab waa koox baadiyeysan una taagan inay bulshada Soomaaliyeed baadiyayso, manhajka ay faafinayaanna waa mid khatar ku ah diinta Islaamka iyo jiritaanka bulshada muslimka ah.
2. Dawladda Soomaaliyeed waa dawlad muslim ah oo aysan banaanayn in la gaalaysiiyo ama lala dagaalamo.
3. Kooxda xag-jirka ah ee Al-shabaab waxaa ku waajib ah inay Alle uga tawbad keenaan fekerkooda qalloocan iyo falal-dambiyeedyadooda foosha xun.
4. Ma bannaana in lagu biiro kooxda Al-shabab ama loo fidiyo taageero nooceey doonto ha ahaatee.
5. Waxaa xaaraan ah in la qariyo xubnaha Al-shabaab, waana waajib diini ah in xubnaha Al-shabaab loo gacan geliyo hay?adaha ammaanka ee dawladda Soomaaliyeed ee ku shaqada leh.
6. Waxaa xaaraan ah in loo ergeeyo ama laga shaqeeyo sii xabsiyada looga sii dayn lahaa eedeysanayaasha Al-shabaab ee ku jira gacanta hay?adaha ammaanka ee dowladda.
7. Waxaa waajib ku ah madaxda dowladda inay shacabka Soomaaliyeed ka badbaadiyaan dhibaatada Al-shabaab, muwaadiniintana waxaa waajib ku ah inay dowladda ku gacan siiyaan hawlgalada ka dhanka ah kooxda Al-shabaab talooyinka shirweynaha.
Ra?isal wasaare Cabdi Faarax Shirdoon oo ka hadlay xiritaanka shirkii culimada ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay in badan ku wareertay dhibaatooyinka Xag-jirnimada, wuxuu qoddobada shirka culimada ku tilmaamay daawadii xag-jirnimada isagoo dhalinta ugu baaqay in ay ka fogaadaan.